၎။ သိဒ္ဓတ္ထ Siddhattha 悉達多 - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on June 27, 2014 at 9:30am
ငါးရက်မြောက်သောနေ့တွင် မင်းကြီးက ပုဏ္ဏားတော်များကို ဖိတ်သည်။ သားတော်၏ လက္ခဏာတို့ကို ကြည့်ရှုဖတ်ကြားစေသည်။ ပုဏ္ဏားတော်ခုနှစ်ယောက်တို့က " သားတော် သည် စကြဝတေးမင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသော်လည်းကောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်" ဟူ၍ နှစ်ခွ ဆိုကြသည်။ အငယ်ဆုံးဖြစ်သော ကောဏ္ဌညပုဏ္ဏားကမူ " အရှင့်သားတော်သည် တောထွက်၍ ဘုရားဧကန် ဖြစ်လိမ့်မည်" ဟူ၍ တစ်မျိုးတည်းသာဆိုသည်။
မင်းကြီးက " ငါ့သားတော်သည် ဘယ်အရာကို မြင်၍ တောထွက်မည်နည်း " ဟု မေးမြန်းသည်။
" သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်းဟူသော နိမိတ်ကြီး လေးပါးကို မြင်၍ တောထွက်ပါမည် " ဟု ကောဏ္ဌညပုဏ္ဏားက ဖြေကြားသည်။
ဘုရားလောင်းကို " သိဒ္ဓတ္ထ "ဟူ၍ အမည်ပေးသည်။ ဂေါတမ အနွယ် ဖြစ်သောကြောင့်" သိဒ္ဓတ္ထဂေါတမ " ဟူ၍လည်း ခေါ်ကြသည်။
On the fifth day the king invited the court brahmins and asked them to read the future of Bodhisat. The seven brahmins told the king.
" Yours son will become either the sovereign of the whole universe or the Enlighteened Buddha;" thus they prophesied in two ways. But the youngest brahmin Kondannya said definitely. " Your son will retire from the world and become the Enlightened Buddha."
The king then asked, " What will he see and retire from the world? "
Kondannya brahmin replied, " He will retire from the world after seeing the four omens viz; an old man,asick person,adead person andamonk. " Bodhisat was named Siddhattha and as he was of the Gotama clan He was also called Siddhattha Gotama.
“你的兒子將成為整個宇宙的任何主權或成佛”;因此，他們預言在兩個方面。但最年輕的婆羅門 憍陳如 (巴Kondannya)肯定地說。 “你的兒子將退任的世界，成為一個開明佛。”
憍陳如 (巴Kondannya)婆羅門回答說，“他會看到四個徵兆即退休後，來自世界;。一個老頭，一個有病的人，死的人，一個和尚” 菩薩 (巴Bodhisatta)被評為悉達多和他是喬達摩氏族的他也被稱為喬達摩悉達多 (巴Siddhattha Gotama.)。